Lianchuang Technology Group nwere nzukọ nkwonkwo maka nkeji nke atọ | Lianchuang
Igwe oyi / kpo oku
Commercial Air oyi-Typhoon Series
Mini Cool-bee Ikuku oyi
Multi Air Expert 4 na 1
Multi Air Expert 5 na 1
Multi Tower Air Expert 4 na 1
Oghere Igwe Igwe Igwe
Tower Ikuku oyi
Young Guy Personal ikuku oyi
Circulator onye ofufe
Ime ụlọ ịwụ okpomọkụ
Isi ihe mmetụta okpomọkụ
Okpomoku na Humidifier
Tower Ultra Thin okpomọkụ
Tlọ elu ya na Eco Heater
Dum Ime ụlọ okpomọkụ
Lianchuang Technology Group nwere nzukọ nkwonkwo maka nkeji nke atọ
N'ụtụtụ nke October 13, Lianchuang Technology Group nwere a nkwonkwo nzukọ nke atọ nkeji iri na ise nke 2020 na Lianchuang Academy. Onye isi oche otu Lai Banlai, ndị isi otu Zhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, Onye isi oche ndị enyemaka Lai Dingquan na ndị isi ndị ọzọ, yana ndị isi dị iche iche nke otu Ndị isi nke ngalaba ọrụ, ndị isi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche, ndị otu Kọmitii Njikwa Ego, na ndị isi ego na ndị ọrụ mmadụ gara nzukọ ahụ. Nzukọ ahụ bụ Chen Ye, onye nduzi otu na onye na-enyere Onye isi oche aka.
Na nzukọ ahụ, Liu Qinghui, osote onye isi njikwa nke Liantek, Yao Li, osote onye isi njikwa nke Lianchuang Electric Appliance Industry Co., Ltd, Wen Hongjun, onye isi njikwa Xinliangtian, Xu Jin, onye isi njikwa nke Lianchuang Electromechanical, na Ning Chuanjiu , osote onye isi njikwa nke Lianchuang Sanming, n'otu n'otu rụrụ arụmọrụ nke otu ụzọ n'ụzọ atọ. akụkọ ọrụ. Onye nta akụkọ ọ bụla jiri usoro data doro anya na nghọta, yana foto na ederede iji nyochaa nke ọma na ịkọwapụta nke ọma na nyocha nke atọ nke atọ, mmecha nke isi ọrụ ise nke afọ, na ebe ndị gbara ọchịchịrị na nke gbara ọchịchịrị na nkeji nke atọ, na tinye usoro atụmatụ nke anọ nke anọ. Ka oge na-aga, Chen Ye, onye isi otu a ma bụrụkwa onye na-enyere onye isi oche aka, kwupụtara ebumnuche azụmahịa nke ngalaba ọ bụla na 2021, ma hazie ụzọ nke anọ nke ọrụ mmadụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Onye isi oche onye isi oche Lai Dingquan mere ndokwa na nhazi zuru ezu maka ọrụ mmefu ego nke 2021.
N'oge nzukọ a, Wei Weicong, onye isi ngalaba IT nke otu a, kọọrọ banyere mmejuputa usoro ihe ọmụma nke otu ahụ na ụlọ ọrụ ọ bụla na 2020. Chen Jiandong, onye ndụmọdụ IT nke otu ahụ, kesara ikpe mara nke ozi, ma tụpụta ụzọ na usoro iji melite njikwa azụmahịa site n'enyemaka nke sistemụ ihe ọmụma. Ebumnuche.
Onye isi oche Lai Banlai kwuru okwu mmechi, na-ekwusi ike ma na-arịọ ọrụ metụtara ya.
1. Nọgide na-emejuputa ma kwado usoro iwu ihe ọmụma. Otu a etinyela ihe karịrị yuan 20 tupu na mgbe emechara. All ụlọ ọrụ ga-arụsi ọrụ ike na-akwalite njikwa ozi. Ndị niile na-eji sistemụ ihe ọmụma, site n'ọkwa dị elu ruo ndị ọrụ nkịtị, ga-enyerịrị asambodo ọrụ; 2. companylọ ọrụ ọ bụla Site na "tebụl ahịa atọ" ahụ, anyị ga-enyocha ohere ahịa maka mpaghara ọ bụla na ngwaahịa ọ bụla, wee gbaa iji mezue ihe ngosi azụmahịa kwa afọ; na nke atọ na nke anọ, ụlọ ọrụ ọ bụla ga-eme ndokwa maka mmefu ego nke 2021 na isi ọrụ ndị ọrụ mmadụ; nke anọ, otu ahụ ewebatala ọtụtụ ndị isi njikwa ọrụ aka n'otu ụlọ ọrụ, onye ọ bụla kwesịrị imeghe uche ya, mụta ihe n'aka ibe ya, mụta ihe n'aka ibe ya, nwee ọganihu ọnụ, melite arụmọrụ ụlọ ọrụ na uru ya, ma melite elele ndị ọrụ.
N'ikpeazụ, Lai Dong gbara onye ọ bụla ume, sị: "Gaa n'ihu ma nwee obi ụtọ." Gbaa onye obula ume ime ihe gabiga oke ma mee nke oma, ka ha nwee ike ihu uru nke ha n’elu ikpo okwu nke Lianchuang ma mezuo nrọ ha.
Ruo ugbu a, nzukọ nkwonkwo nke atọ nke Lianchuang Technology Group ejirila nke ọma mechie. Nzukọ ahụ mere ndokwa maka ọrụ ndị bụ isi maka nkeji nke anọ ma mee ka atụmatụ atụmatụ na ebumnuche azụmahịa pụta maka 2021. companylọ ọrụ a ga-eji nzukọ a dị ka ohere iji chọpụta uru, mezue adịghị ike, ma gbalịsie ike ịgba ọsọ maka nkeji nke anọ. Gbalịsie ike ịlụ ọgụ maka egwuregwu mmechi 2020 ma tọọ ntọala siri ike maka mmalite nke 2021!
Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd na-ejikọ R & D, n'ichepụta, ire ahịa na ọrụ, ka ọ dị ugbu a na-agbaso njigide nke onwe ya na ụkpụrụ nke mkpa ndị ahịa.
E-mail: Mbupụ 15@szlianchuang.com